I-OnePlus 3 iya kufumana uhlaziyo ngaphandle kokufika kwe-OnePlus 3T entsha Iindaba zeGajethi
Le yinto abasebenzisi abaninzi ababecaphukisa ngayo emva kokubona ukufika kwe-OnePlus 3T entsha kunye nokuphela kwentengiso yemodeli yangaphambili, abaninzi babecinga ukuba i-OnePlus iyayeka ukuxhasa iimodeli zangaphambili. Akukho nto iqhubekayo kwinyani kwaye kukuba emva kokuqinisekisa ukuba i-Android 7.0 Nougat izakufikelela kwiziphelo zombini ngokulinganayo, Inkampani yaseTshayina iyangqina ukuba ayizukuyeka ukuxhasa i-OnePlus 3.
Oku kuthetha ukuba iimodeli ezimbini ze-smartphone ziya kuba nohlaziyo olufanayo nangona enye intsha kunenye, yeyiphi Kubalulekile kubo bonke abasebenzisi abane-OnePlus 3 ezandleni zabo.
Esiphakathini Android Authority ebephethe ukupapasha iindaba kwinethiwekhi kwaye oku kuye kwathoba kancinci uluntu olukhulu lwe-OnePlus oludidekile nalo mbandela nangona bebecacile ukuba uNougat uza kubafikelela ewe okanye ewe kwizixhobo zabo. Zombini iimodeli ziya kuhlaziywa ngokulandelelana kwexesha ukonwabela iinguqulelo ezifanayo de i-OnePlus 3T iyeke ukuvuselela kwaye oku kulungile kuwo wonke umntu.
Ngokunokwenzeka kukho iinguqulelo ezimbini eziza kufumana ezi zixhobo ziphela ukuba sinika ingqalelo kwinto esiyibonileyo ngokuhamba kwexesha kwi-OnePlus. Akukho mhla othile kwaye ezi modeli zinokufikelela kwiinguqulelo ezintathu zenkxaso ngokokuhlaziywa, kodwa Kwimeko embi ngeenguqulelo ezimbini sonelisekile. Ngoku kwiiforamu ze-OnePlus kubonakala ngathi kubuyise ukuzola okuthe kwiintsuku ezimbalwa kunqunyulwa kukufika kwale OnePlus 3T, zombini iiterminali ziyamangalisa, kodwa ngokucacileyo i-3T ineenkcukacha ezincinci ezilahlekileyo ezi-3.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-OnePlus 3 iya kufumana uhlaziyo ngaphandle kokufika kwe-OnePlus 3T entsha
Idatha entsha malunga ne-Samsung J3 2017 hit net